Barnaamijka Tifaftirka Sawirka ee Soomaaliya
Dib u Eegid dhameystiran oo ku saabsan Tifatirayaasha Sawirka Bilaashka ah ee ugu Fiican Windows
Softiweerka ugu fiican ee tafatirka sawirada ayaa kaa caawin doona inaad kudarto diirada, u soo jiido mawduucaaga muhiimka ah isla markaana aad u badasho sawir dhexdhexaad ah wax run ahaantii la yaab leh. Si kastaba ha noqotee, dhibaatada ugu weyn ee inta badan sawir qaadayaasha hiwaayadda ahi waa: barnaamijkee tafatirka sawirrada ee lagu kabayo xirfadahaaga? Waxaa jira bilaash iyo waliba barnaamijyo qaali ah oo tafatirka sawirada oo laga helo internetka. Dhammaantood waxay sheeganayaan inay yihiin kuwa ugu fiican, laakiin dhab ahaantii ma yihiin? Maqaalkani wuxuu ka hadli doonaa qaar ka mid ah barnaamijyada tafatirka sare iyo waxa ay bixiyaan.
Tifatiraha sawirka ugufiican ee bilaashka ah waa StockVault. Waxaa loo heli karaa si bilaash ah oo laga soo dejiyo websaydhkooda. Waxay leeyihiin interface aad dareen leh iyo muuqaalada ay tafatirka sawir waa heer sare. Nooca bilaashka ah wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ka soo dhoofsato oo aad wax ka bedesho sawirada ka soo baxa boodhka, skaanka iyo aaladaha kale - xaddidan ayaa jirta oo keliya haddii aad rabto inaad tijaabiso dhammaan astaamahooda.
Haddii aad u baahan tahay tifaftire si sahlan loo isticmaali karo isla markaana si dhakhso leh u qaban kara hawlo adag, markaa sawirka Ashampoo ayaa ah xalka ugu fiican ee hal-guji. Iyada oo ay fududahay in la fahmo isku xirnaanta iyo jihooyinka fudud, kuma qaadaneyso waqti dheer in la barto sida loo isticmaalo. Waxay sidoo kale leedahay hal-gujis sixid sawir ah oo saxi kara isha cas, dalagga, rogrogmi kara iyo rogrogmada. Waxa kale oo aad samayn kartaa sixitaan si aad u iftiimiso ama u madoojiso sawirada, afaysto, ka saarto isha casaanka, sepia, buluug ama midabbada cawl iyo calaamadaha dalagga.
Tifatire kale oo sawir qaade ah ayaa ah 'Photoshop'. Sawir-qaadiddu waxay la mid tahay tifaftiraha sawirka Ashampoo siyaabo badan. Waxay leedahay hagitaanno fudud oo tilmaam ah iyo awood u leh inay ku qabato hawlgallo fara badan hal guji oo guji. Tusaale ahaan, waxaad isku dari kartaa ciribtirka indhaha casaanka leh dib-u-hagaajinta sawir iyo kobcinta sawirrada miiraheeda isla markaana ku milmaan sawirro badan hal sawir hal ah. Iyada oo leh saamaynta kala duwan, waxaad dooran kartaa mid ku habboon dhadhankaaga.
Ta saddexaad waa Sawir-qaadashada Aasaasiga ah. Kani waa barnaamij tafatir fudud oo hadana aad waxtar u leh. Waad isku milmi kartaa sawirro badan iyo qaabab sax ah, si fudud oo dhaqso leh u hagaajin kartaa dhalaalka, isbarbardhigga iyo saameynta asalka. Iyo tan ugu fiican oo dhan, oo leh 'Photoshop Basic' waxaad ku furi kartaa kuna tafatiri kartaa qaabab kala duwan sida JPEG, PNG, TIFF, GIF, iwm.
Tifatiraha Sawirka Pro waa dib u eegis kale oo caan ah oo dhameystiran. Software tafatirka waxaa laga heli karaa labada nooc ee Windows iyo Mac. Tifatiraha sawirkani wuxuu leeyahay iskudhaf gaar ah oo fudud iyo astaamo horumarsan oo ka dhigaya mid aad u fudud in la isticmaalo. Waxaa intaa dheer, tan sidoo kale waxaa lagu heli karaa luqado kala duwan (sida Jarmalka iyo Isbaanishka) taasoo ka dhigaysa mid aad u badan marka laga hadlayo barashada xiriirka caalamiga ee ganacsiga. Iyada oo leh shaashad shaashad buuxda leh iyo karti-u-kaydin, taas macnaheedu waa inaadan waligaa seegi doonin wax fursad muhiim ah oo sawir ah.
afraadna waa Kodak EASYSHARE 3.5i. Tani waa tafatire sawir kale oo bilaash ah oo bilaash ah oo loo heli karo PC. Waxaad u adeegsan kartaa tifaftiraha sawirkan si aad u abuurto, wax uga beddesho, u cabirto, u soo celiso ama u hagaajiso sawirrada si fudud oo dhaqso leh. Oo ugu fiican oo dhan, tani waa la jaan qaada qaabab file kala duwan oo ay ku jiraan PICT, TIFF, EPS iyo BMP. Dheeraad ah, waxay sidoo kale bixisaa shaqooyin tafatir horumarsan sida dib u bixinta boqolaal qaab oo isku mar ah, isku darka iyo tirtirka lakabyada. Xaqiiqdii, tani waxay aad ugu egtahay Adobe Photoshop marka la eego tafatirka.
Ugu dambeyntiina, waxaan u nimid tifaftireyaasheena sawir-qaadashada ee bilaashka ah. Haddii aad raadineyso barnaamijka bilaashka ah ee bilaashka ah ee tifaftirka qolka iftiinka, waa inaad iska hubisaa Tifatiraha Sawirka Pro. Barnaamijkan wax ka beddelka ayaa kuu oggolaanaya inaad isku darto noocyada kala duwan ee warbaahinta dhijitaalka ah midba midka kale oo aad si fudud ugu adeegsato xoojinta iyo miirayaasha. Way fududahay in xitaa dadka bilowga ahi bilaabi karaan isticmaalkooda soona saari karaan sawirro yaab leh.